ကြိုဆိုခြင်း > ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ သွားရန် > ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် ပညာ သင်ကြားခြင်း > ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် ပညာ သင်ကြားခြင်း
ပြင်သစ်တွင်ပညာသင်ကြားနေသောမြန်မာကျောင်းသားဦးရေမှာ အလွန်နည်းပါးလျှက်ရှိနေပါသေးသည်။ အထူးထူးသော လူမှုအဖွဲ့အစည်း ယဉ်ကျေးမှုတို့ အထွဋ်အထိပ်သို့ရောက်နေသော ယနေ့ခေတ်တွင် ပညာရေးဧ။် အရေးပါပုံ ကိုလူတိုင်းနားလည်သဘောပေါက်နေကြသည့်အပြင် အထူးသဖြင့် သင်ယူလို့မကုန်နိုင်အောင် အပြားပြားသော အဆင့်မြင့်ပညာရေးတို့ထွန်းကားရာကာလသမယ၌ ပြင်သစ်သို့ မြန်မာကျောင်းသားများ သွားရောက်ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်သံရုံး ဧ။် အရေးပါသော လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုဖြစ်နေပါသည်။
ပြင်သစ်စာသင်ကြားထားသူဖြစ်ပါက ပြင်သစ်တွင်နေထိုင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်မှာ မှန်သော်လည်း တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များ၌ အဆင့်မြင့်ပညာရပ်များကို ဆည်းပူးရန်အတွက်မူ မသင်မဖြစ်၊ မတတ်မဖြစ် တတ်ထားရန်မလိုပါ။ တကယ်တမ်းတွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၌ အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် သင်ကြားပို့ချပေးနေသော သင်တန်းတော်တော်များများရှိပါသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့သွားရောက်ကာ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များ၌ အဆင့်မြင့်ပညာရပ်များ လေ့လာဆည်းပူးလိုသူများ ကို Institut Français de Birmanie (IFB) မှ ကူညီပေးရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။ သင်ယူလိုသည့် ဘာသာရပ်အလျှောက် လိုအပ်သော သတင်း အချက်အလက်များ၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ပညာသင်ဆုရရန် အခွင့်အလမ်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာကျောင်းများနှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်မှုများ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံဧ။် ကျောင်းသားဘ၀ သိသင့်သိထိုက်စရာများ၊ တစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် လိုအပ်သော အကြံဥာဏ်နှင့်လမ်းညွှန်မှုများ ကို IFB မှာမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အောက်ပါလင့်ခ်များမှလည်း အကြံဥာဏ်ကောင်းများ ရယူနိုင်ပါသည်။
ကနေဒါအပါအ၀င် မြောက်အမေရိကတိုက်မှ ဥရောပတစ်ခွင်လုံးအပြင် အာဖရိကကိုဖြတ်ကာ အာရှအထိ ပြင်သစ်ဘာသာစကားကို ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူပေါင်း သန်း၂၂၀ ကျော်က နေ့စဉ်ပြောဆိုသုံးစွဲနေကြဆဲဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၇၅ နိုင်ငံဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြင်သစ်စကားပြောသူများအသင်းကြီးတွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဧ။် သုံးပုံနှစ်ပုံမှာ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ်ပါသည်။ ပြင်သစ်ဘာသာစကားသည် ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဗဟုသုတ အဖုံဖုံအတွက်သာမက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၌ တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသော ရုံးသုံးသံတမန်ဘာသာစကားလည်း ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြင်သစ်ဘာသာစကားကိုသင်ယူရခြင်း အကြောင်းများစွာရှိပါသည်။ ယနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်လည်ပတ်သော နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များတွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံသားများမှာ အများဆုံးဖြစ်သည့်အပြင် အခြားသော ကနေဒါ၊ ဘယ်လဂျီယံ၊ ဆွစ်ဇာလန် စသည့် ပြင်သစ် စကားပြောနိုင်ငံများမှလာသော ဧည့်သည်အရေအတွက်မှာလည်း အများအပြားပင်ရှိပါသည်။
ပြင်သစ်ဘာသာစကားသင်ယူလိုသူများအတွက် ရန်ကုန်မှ L’Institut français de Birmanie (IFB) နှင့် မန္တလေးမှ Centre de français de Mandalay (CFM) တွင် အခြေခံမှစ၍ အဆင့်မြင့်အတန်းများအထိသာမက သက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များအထိ သင်ယူလိုသူဧ။် ရည်မှန်းချက်နှင့် စိတ်အားထက်သန်မှုအရ အတန်းပေါင်းများစွာ ရွေးချယ် တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
1.	ပြင်သစ်ဘာသာစကားသင်ယူနိုင်သည့် သင်တန်းအမျိုးမျိူး ကို IFB ၌ ပို့ချလျှက်ရှိပါသည်။ ပြင်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်း ယဉ်ကျေးမှု အကြောင်းကိုလည်း မြန်မာဘာသာဖြင့် သင်ယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက ဒီလင့်ခ် www.afrangoun.org မှာ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) ဒီလိပ်စာ info@ifb.net.mm သို့ စာဖြင့်တိုက်ရိုက်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) ဒေါ်ဝါ၀ါတင်၊ ဖုန်းအမှတ် 535428 သို့လည်း ခေါ်ဆိုကာ သိလိုသည်များကို မေးနိုင်ပါသည်။
2.	မန္တလေးမှ စိတ်ပါဝင်စားသူများ အနေဖြင့်ဒီလိပ်စာ frenchym@mandalay.net.mm သို့ စာဖြင့်တိုက်ရိုက်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
3.	ပြင်သစ်စာသင်ယူခြင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ သိလိုသည်များနှင့် ပြင်သစ်စကားပြောသူများ / နိင်ငံများအကြောင်းကိုဒီလင့်ခ် www.diplomatie.gouv.fr/en/espaces_dedies.php3?id_rubrique=1934 မှာကြည့်ပါ။
ပြင်သစ်သို့လာရောက်ပညာသင်ယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံကို ပေးနိုင်မည့် နေရာနှစ်ခုရှိပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရှင်းပြထားသော အဓိက နေရာ နှစ်ခုမှာ ---
(က) Campus France
ပြင်သစ်အစိုးရဧ။် စီမံအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိပြီး အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ် များနှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်နေသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄င်းအနေဖြင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံဧ။်အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသိအောင် အကျိုးဆောင်ပေးပြီး ၊ ရေခြားမြေခြားမှ ကျောင်းသားများ ပြင်သစ်သို့ ပညာသင်လာရာဝယ် အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ် လျှောက်လှမ်းနိုင်အောင် ကူညီပေးရုံမျှမက နေမှုထိုင်မှုမှအစ ပညာပြည့်ဝကာ အိမ်အပြန်လမ်းအထိ အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာမရှိအောင် ကူညီပေးလျှက်ရှိပါသည်။
နောက်မကြာမှီ Campus France ဧ။် မြန်မာနိုင်ငံရုံးခွဲကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ Institut Français de Birmanie (IFB) ၀င်းအတွင်းမှာ ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
(ခ) ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဧ။် တရားဝင် ၀က်ဘ်ဆိုဒ် www.diplomatie.gouv.fr/en/espaces_dedies.php3?id_rubrique=2192
၃။ အာရှရှိ ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့်သင်ကြားသော တက္ကသိုလ်များတွင် ပညာသင်ယူခြင်း
နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်များမှပေးသော ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာ၊ ဒီကရီ၊ ဘွဲ့များ (အထူးသဖြင့် ပြင်သစ်တက္ကသိုလ်များမှ ပေးအပ်သောဘွဲ့များ) ကို ပြင်သစ်အထိသွားစရာမလိုပဲ ဒေသတွင်းရှိ ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့်သင်ကြားသော တက္ကသိုလ်များတွင် ဆည်းပူးခြင်းဖြင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များမှ အသိအမှတ်ပြုပေးအပ်သောဘွဲ့ကို ရယူနိုင်နေပြီဖြစ်ရာ ဤနည်းဖြင့် မာစတာဘွဲ့ရယူထားသူဦးရေမှာ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသများတွင် အတော်လေး မြင့်မားနေပြီ ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ပညာသင်ယူရန်အတွက် ပြင်သစ်တက္ကသိုလ်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) မှ ကူညီထောက်ပံ့မှုများစွာပေးသည်ဖြစ်ရာ အထူးသဖြင့် ဘွဲ့လွန်မာစတာ သင်တန်းများ အတွက် အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းရှိ အဆင့်မြင့်ပညာဆည်းပူး လိုသူများကို ပညာသင်ဆုများ ပေးအပ်လျှက်ရှိပါသည်။
အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်များ၊ သင်တန်းများ၊ ကျောင်းများနှင့် ပတ်သက်သော အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် စုံစမ်းလေ့လာနိုင်ပါသည်။